Banyere Anyị - Wuxi Boln Laser Tech Co., Ltd.
Automotive Parts Laser akara Machine
Ofụri Esịt nchọ Laser akara Machine
Igwe na-egosi laser
Nameplate Laser akara Machine
Wide Area Laser akara Machine
BOLN Laser bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke na-etinye ọnụ R&D, nrụpụta, azụmaahịa na ọrụ ahịa ahịa. Anyị na-pụrụ iche na ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi laser marking akụrụngwa, na-enye ọkachamara n'ozuzu akpaghị aka ngwọta dabere na laser marking ngwa.
Companylọ ọrụ anyị na-agbaso R&D nke onwe ha ma na-elekwasị anya na ahụmịhe onye ọrụ, ihe ọhụrụ na-agbanwe agbanwe, na-emecha atụmatụ niile site na onwe anyị. Iji hụ na usoro niile na-achịkwa ma na-ewepụ ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya na usoro nke ịrụ ọrụ ahụ, anyị na-agbaso usoro mepụtara nke ịghara ịpụ na usoro mmemme onwe ya, na-enye ndị ọkachamara ihe nkwụsị na ọrụ maka ndị ọrụ.
Ngwaahịa anyị bụ isi gụnyere fiber laser marking serials, CO2 laser marking serials, ultraviolet laser marking serials na na. Ngwaahịa niile nwere ike ịkwadebe usoro mmepụta dị iche iche, akụrụngwa akpaghị aka ma daba maka ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
All ndị a akụrụngwa e n'ọtụtụ ebe na-eji na integrated circuit ibe, kọmputa ngwa, ulo oru biarin, ese, electronic na nkwukọrịta, aerospace akụkụ, akpaaka akụkụ, ezinụlọ ngwa, ngwaike ngwaọrụ, ebu, waya na USB, nri mbukota, ọla, ndịna na ederede ederede na ụtaba na agha, na arụmọrụ usoro mmepụta.
Anyị nwere ikike nyocha siri ike. Ndị ọrụ R & D anyị maara nke ọma nwere ọtụtụ nchọpụta ikike na ọtụtụ ikike nwebisiinka software. Anyị ụlọ ọrụ rube isi onwe ha R&D na-elekwasị anya na onye ọrụ ahụmahụ, na-aga n'ihu ọhụrụ, gụchara niile aghụghọ site onwe anyị. Iji hụ na usoro niile na-achịkwa ma na-ewepụ ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya na usoro nke ịrụ ọrụ ahụ, anyị na-agbaso usoro mepụtara nke ịghara ịpụ na usoro mmemme onwe ya, na-enye ndị ọkachamara ihe nkwụsị na ọrụ maka ndị ọrụ.
Ngwaahịa ọ bụla sitere na BOLN Laser na-enyocha ya dịka ụkpụrụ ISO9001 si dị tupu etinye ya n'ahịa. Ọtụtụ usoro ngwa ọrụ laser enwetala asambodo CE.
Ihe ngosi IC nke CCD Visual S ...
VIN Code Laser Equipment maka abụọ ...
Laser Anti-kanta kanta Techno ...
2F, Nke20 Building, No.33 Zhihui Road, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, China
7 abọchị n'izu site na 08:30 am ruo 5:30 pm
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọdụ ala, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt